> Resource > Ladnaansho > Recovery File PSD: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray PSD Files
Waxaan soo kaban karto, tirtiray PSD Files?
Hey qof kasta, waan dhibaataysnahay, oo qoto dheer. Waxaan tirtiray file a PSD (file Photoshop) taas oo ah shaqo aad u weyn waxaan u leeyihiin in ay samatabbixin Jimcaha shil. Anigu ma u ekaan kartaa in ay hesho oo waxaan haystaa gurmad lahayn. Ma suurogalbaa in kabsado file PSD aan la nooc ah qalab? Rajaynaynaa in qof kaa caawin kara m. Best xiriira.
Waxaad ka eegi kartaa Recycle Bin on your computer hore. Haddii ay halkaas ma joogo, jawaabta haa tahay weli waa haddii aad leedahay PSD software kabashada file. Marka file a PSD uu tirtiray, formatted ama laga badiyay, waxa aan dhab ahaantii la waayay. Waxaa la qorayaa xogta sida geli karin nidaamka. Oo wuxuu weligiisba u la khasaarayaa marka la overwritten by xog cusub oo ku saabsan baabuur. Tani waxay ka dhigan tahay u badan tahay inuu ka soo kabsado files PSD haddii aad deg deg ah oo ku filan oo ay helaan barnaamijka waxtar leh Photoshop file PSD aad.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac yahay oo dhan waxa aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado tirtiray files PSD. Qalabkani waxa uu awoodo inuu ka soo kabsado PSD files lumay ay sabab u tahay sababahan soo socda: tirtirka shil ah, formatting drive, nidaamka / musuqmaasuqa codsiga, tirtirka xijaab ama jeermiska fayraska. Marka laga reebo ka image PSD, qaab image kale sida jpeg, PNG iyo EPS waxaa taageera aad.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka Wondershare Data Recovery inuu ku soo bilowdo Photoshop kabashada file PSD ka hoos ku qoran. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad baarista drive iyo Falanqeynta helay files PSD.
Qabtaan Recovery File PSD in 3 Talaabooyinka
Waxaan isticmaali doonaa Wondershare Data Recovery for Windows, taas oo uu leeyahay hawlaha la mid ah la version Mac, inuu ka soo kabsado files PSD.
Tallaabada 1 Select hab kabashada inuu ka soo kabsado files PSD tirtiray
Waxaad ka arki kartaa image hoos ku qoran in barnaamijka siin doonaa 3 hababka soo kabashada idiin, oo dhan la tilmaamo faahfaahsan.
Waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted ama kharribeen files PSD.
Tallaabada 2 Scan xijaab / drive in files PSD ayaa laga badiyay ka
Halkan kaliya u baahan tahay in aad dooratid xijaab / drive in files PSD ayaa laga badiyay ka oo guji "bilow" furmo si ay u bilaabaan iskaanka u badiyay files PSD.
Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado files PSD ka qalab lagu kaydiyo dibadda, fadlan hubi in ay noqon karaan si fiican u xiran your computer.
Tallaabada 3 Ladnaansho files PSD
Dhammaan files helay on your xijaab / drive lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" iyo "Jidka" qaybood kadib markii iskaanka. Waxaad dooran kartaa "PSD" nooca file in ay ku eegaan helay files PSD iyo hubi in aad laga badiyay files PSD aan la soo celin karin ama.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso files PSD aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan dooro ah xijaab / drive cusub si loo badbaadiyo files PSD soo kabsaday.
Sida loo abuuro xijaab boot aad PC ah